Game Maker8.0pro....! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Gamemaker8.0pro... လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!မိမိကိုယ်တိုင် Game လေးတွေ လုပ်ချင်ရင်တော့ ယူသွားလိုက်ပါ...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 8MB လေးပဲရှိပါတယ်...!" အောင်အောင်" ကတော့ မလုပ်တက်ဘူး...! သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်တော့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...! သုံးကြည့်ပါ အဆင်မပြေရင် " အောင်အောင် "ဆီဆက်သွယ်လိုက်ပါ...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire... လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
"ဒီမှာယူသွားပါ..." အတက်ပညာ အသိပညာ တိုးပွားနိုင်ပါစေ...!
No Response to "Game Maker8.0pro....!"